Abuumansuur oo mar kale iska caabiyay Duulaankii Alshabaab. – Hornafrik Media Network
Abuumansuur oo mar kale iska caabiyay Duulaankii Alshabaab.
By HornAfrik	 On Aug 12, 2017
Hase ahaatee Al-Shabaab ayaa u muuqata in waqti dheer ku soo qaadaneyso sidii ay ku soo afjari laheyd Wadaadka ka fallaagoobay ee Mukhtaar Roobow oo horay uga mid ahaa Saraakiisha ugu sareysa Kooxda, waxaana la sheegayaa inuu wadaadka helayo taageero kala duwan iyo maleeshiyaad aad u fara badan oo taabacsan.
Warar ay heshay Hornafrik ayaa sheegaya in Wasiirka Amniga Koofur Galbed Xasan Xuseen Maxamed iyo Saraakiil Ciidan oo isugu jira Milatariga Soomaaliya iyo kuwa Koofur Galbeed ay Saanad Ciidan ku Wareejiyen Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Masuur oo ay is hor fadhiyaan Maleeshiyaad Al-shabaab.
Wasiirka Amniga iyo Saraakiisha la socota ayaa la sheegay in Saanadda Ciidan ay ka qaadeen Degmada Xudur,waxaana Saanadu isugu jirtaa Hubka Culus iyo kan Fudud,iyadoo la doonayo in Wadaadka lagu Magacaabo Sheekh Muqtaar uu Hubkaasi isaga Difaaco Al-shabaab.
Sidoo kale waxaa la sheegay in Ciidamada Dowladda iyo kuwa Koofur Galbeed ee Gurmadka ugu tagay Sheekh Muqtaar Roobow iyagana loo qeybiyay Hub si ay Al-shabaab uga difaacaan Sheekh Muqtaar Roobow oo Dhowr jeer la dagaalamay Al-shabaab oo Weerar ku soo qaaday Degaanka uu ku sugan yahay ee Abal.
Dowladda Mareyknka ayaa Wadaadkaan lagu Magacaabo Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Masuur ka saartay Liiska waxa loogu yeero Argagixisada 24-kii June ee Sanadkaan,waxaana tan iyo waxii Xilligaas ka dambeeyay uu wajahayay Cadaadis uga imaanayay Al-shabaab.
Maxkamad ku Taala wadanka Hindiya oo Maanta Xukun ku riday 26 Qof oo Soomaali ah.